The Snow White Murder Case ( 2014 ) - Myanmar Asian TV
2014 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Japan Movie လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
စနှိုးဝှိုက်လိုလှပတဲ့ ကောင်မလေး နိုရီကိုမစ်ကီ … လုပ်ငန်းခွင်မှာတော်တယ် … သွက်တယ် … အရည်အချင်းရှိတယ် …
မနာလိုသူတွေလဲပေါတယ် … အရည်ချင်းကောင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့မိန်းမလှလေးတစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါ ?
လုပ်ငန်းမှာ တစ်ဖွဲ့တည်းအလုပ်လုပ်ရတဲ့ ကန်နို …
အခြားအဖွဲ့ကဆိုပေမယ့် … တစ်ကုမ္ပဏီထဲအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ရှီရိုနို …
ဘယ်သူက စနှိုးဝှိုက်တဖြစ်လဲ နိုရီကို ကိုသတ်တာလဲ ? ?
လူသတ်သမားက အရမ်းလည်တယ် … အရမ်းတော်တယ် ✅
လူသတ်သမားကို ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲ ? ?
ဘာကြောင့် ရက်ရက်စက်စက်သတ်ရတာလဲ ?
သွေးအေးအေးနဲ့ လူသတ်ပြီး အရမ်းကိုဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့တရားခံကို ….
ဘယ်လိုတွေဖမ်းဆီးမလဲဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါနော် … ?
Horror Movie လို ပုံပျက်ပမ်းပျက်တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေလဲ ကြည့်လို့ရပါတယ် …
ကဲ … အားလုံး ရင်တမမနဲ့ တရားခံကိုအတူတူ ဖမ်းဆီးကြရအောင်နော် ….
Rating အရ IMDb မှာ 7.1/10 တောင် ရရှိထားတာမို့ ဇာတ်လမ်းကောင်းမကောင်းကတော့ အထူးတလည် ပြောမနေတော့ဘူးနော် ….
File Size : ( 814 MB ) | ( 378 MB )
Actors: Erena Ono, Go Ayano, Mao Inoue, Misako Renbutsu, Mitsuki Tanimura, Nanao, Shihori Kanjiya
Openload.co Myanmar814 MB Download Soliddrive.co Myanmar814 MB Download Openload.co Myanmar378 MB Download Soliddrive.co Myanmar378 MB Download
Trailer: The Snow White Murder Case ( 2014 )